Ny enina amin'ireo tanàna folo tsara indrindra eran-tany hafindra toerana dia any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Ny enina amin'ireo tanàna folo tsara indrindra eran-tany hafindra toerana dia any Etazonia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • culinary • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Vaovao momba ny lamaody • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Sports • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny enina amin'ireo tanàna folo tsara indrindra eran-tany hafindra toerana dia any Etazonia.
Ny fandinihana dia nandinika ireo lafin-javatra izay matetika raisina rehefa manapa-kevitra hoe aiza no hifindra, anisan'izany ny vidin'ny trano, ny vidim-piainana, ny karama antonony, ny toetrandro, ny isan'ny trano fisakafoanana sy ny habaka maitso, ny hafainganam-pandehan'ny Internet ary ny androm-piainana.
Ny toeran'ny fifindrana mora indrindra dia Istanbul, Torkia izay salanisan'ny vidim-piainana isan-taona dia $17,124 monja.
Basel, Soisa no tanàna lafo vidy indrindra hifindra toerana satria $72,169 isan-taona ny vidim-piainana.
Dubai no toerana fifindra-monina tsara indrindra raha te-hifindra amin'ny toetr'andro tsara kokoa ianao, satria nahazo isa 10 tonga lafatra.
Nisy fikarohana vaovao nanambara ny toerana tsara indrindra eran-tany hafindra toerana, ary tanàna enina any Etazonia no laharana voalohany amin'ny 10.
Austin, Texas dia nomena anarana hoe toerana voalohany hafindra toerana, miaraka amin'i Charleston sy Los Angeles laharana dimy voalohany ihany koa.
Toerana 10 ambony hafindra toerana eto amin'izao tontolo izao
laharana fihetseham-po Temperature antonony (°C) Salanisan'ny trano isaky ny m2 Salanisa karama isam-bolana Vidin'ny fiainana isam-bolana (fianakaviana misy efatra) Isan'ny trano fisakafoanana Isan'ny toerana maitso Hafainganam-pifandraisana (Mbps) Ny faharetan'ny fiainana Maty / 10
1 Austin, Etazonia 20.4 $4,043 $5,501 $3,121 3,503 47 87.50 79 6.02
2 Tokyo, Japana 15.2 $9,486 $3,532 $4,187 101,493 538 17.74 84 5.98
3 Charleston, Etazonia 19.3 $4,040 $4,346 $3,620 646 19 106.50 79 5.68
5 Los Angeles, Etazonia 17.6 $7,396 $5,351 $3,839 10,575 47 74.00 79 5.60
6 Abu Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra 27.9 $2,841 $3,225 $2,813 2,796 10 2.70 78 5.52
7 Miami, Etazonia 24.6 $4,119 $3,777 $3,887 809 38 72.00 79 5.47
9 San Francisco, Etazonia 13.5 $11,943 $7,672 $4,542 4,937 57 96.50 79 5.38
10 Las Vegas, Etazonia 20.3 $2,550 $3,631 $3,137 4,524 16 20.00 79 5.36
Ny tanàna tsara indrindra eto an-tany hafindra toerana dia Austin, TX, Etazonia. Austin dia manana ny hafainganam-pandehan'ny Internet fahatelo tsara indrindra amin'ny tanàna rehetra amin'ny filaharana, amin'ny 87.5 Mbps. Fanampin'izany, ny tanàna dia mahazo isa ambony indrindra amin'ny lafin'ny mari-pana antonony (20.4°C), ary ny karama ambony isam-bolana amin'ny $5,350.
Raha mieritreritra ny hifindra any ivelan'i Etazonia ianao dia ny tanàna faharoa manana isa ambony indrindra Tokyo any Japon. Manana isa tsara i Tokyo noho ny isan'ny trano fisakafoanana sy ny toerana maitso. Ambonin'izany, manana ny salan'isa tsara indrindra amin'ny androm-piainan'izy ireo, miaraka amin'ny mponina miaina hatramin'ny 84.
Charleston, Carolina Atsimo no tanàna fahatelo tsara indrindra hafindra toerana eto an-tany. Ny anton-javatra iray nihoatra azy dia ny hafainganam-pandehan'ny Internet, ny salan'isa dia 106.5 Mbps, midika izany fa izy no haingana indrindra amin'ny tanàna rehetra ao anaty lisitra.
Na dia voatonona ho toerana faha-9 tsara indrindra hafindra toerana aza i San Francisco dia hita ihany koa fa tanàna faha-6 lafo vidy indrindra eran-tany, nanaraka an'i New York tamin'ny toerana faha-5. Ny vidim-piainana isan-taona any San Francisco dia $54,499, raha toa kosa ny vidim-piainana any New York dia $60,525.
Raha ny famindran-toerana morontsiraka no mahasarika anao kokoa, ny Daytona Beach no toerana tsara indrindra hifindrana any Etazonia ary toerana faha-6 tsara indrindra hifindrana eran'izao tontolo izao, arahin'i Miami akaiky.
Basel, Soisa no tanàna lafo vidy indrindra hifindra toerana satria ny vidim-piainana isan-taona dia $72,169, izay mihoatra ny $33,568 isan-taona noho ny salanisan'ny vidim-piainana isan-taona $38,558.
Ny toeran'ny fifindrana mora indrindra dia i Istanbul izay salanisan'ny vidim-piainana isan-taona dia $17,124. Izany dia $55,045 latsaka isan-taona noho ny mifindra any Basel, ary $21,434 latsaka noho ny salan'isa.
Dubai no toerana tsara indrindra hamindra toerana raha te hifindra ho amin'ny toetr'andro tsara kokoa ianao, satria nahazo isa tonga lafatra 10. Ny salan'isan'ny mari-pana ao Dubai dia 28.2 degre Celsius, ary misy 68mm ny rotsak'orana isan-taona.
Ny tanànan'i Doha Qatari no toerana tsara indrindra hifindra any amin'ny morontsiraka, ity tanàna ity dia nahazo isa 7.53/10. 24.83 degre amin'ny antsalany ny hafanan'ny rano ao Doha, manana karama ambony ihany koa izy amin'ny $55,096.
Michael Roberts hoy:
November 17, 2021 amin'ny 01: 10
Tsy azoko antoka hoe iza no nanao ity fikarohana ity, fa raha ny traikefako amin'ny maha-Australian mpila ravinahitra ahy izay nipetraka tany ampitan-dranomasina nandritra ny taona maromaro dia tena tsy misy dikany izany, ary mifanohitra amin'ny fikarohana hafa rehetra hitako momba ilay lohahevitra! Mazava ho azy fa tsy niraharaha an'i Azia Atsimoatsinanana, Aostralia na Nouvelle Zélande ny mpikaroka.